Global Voices teny Malagasy » Sao Tome sy Principe: Ho Famonjena Ny Kolotsaina Maro Sampana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2011 8:40 GMT 1	 · Mpanoratra Sara Moreira Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Sao Tome sy Principe, Fifindràmonina, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Ny fankalazan'i Sao Tome sy Principe  ny faha-36 taonan'ny fahaleovantenany, ny 12 Jolay, dia nahitàna hetsika ara-kolotsaina sy ara-pomban-drazana natao nanerana ny firenena. Tandindon'ny taonjato dimy nahazanatany an'i Sao Tome  fahiny ireny hetsika ireny, ka nandritra izany dia mpiasa marobe no napetraka mba hamokatra siramamy, kakao sy kafe. Ankoatra izany, nitàna ny toeran'ny “seranam-pifanakalozana ara-barotra azy ho an'ireo sambo mpijirika andevo teo amin'ny Tandrefana sy ny Tanibe Afrikana izy”, mbola mitoetra foana mandraka ankehitriny ao anatin'ny fomba amam-panao any an-toerana ny tandinon'ny fandalovan'ireo vahiny .
Na mbola somary manify ihany ny fidiran'ireo avy ao Sao Tomé “amin'ny aterineto”, ny bilaogy Património de São Tomé  (Lovan'i Sao Tome), niforona tamin'ny 2008 ary nofahanana nandritra ny taom-pianarana iray monja mikasika ny Lova Ara-tantara, niainga avy amina tetikasa momba ny Fizahantany, dia nitàna anjara toerana lehibe tokoa tamin'ny fampahafantarana ny fomban-drazana mampiavaka manokana ny firenena. Ny mpitantana ilay laikilasy, Marta Gomes mpampianatra, dia nanazava  [pt] :
Tchiloli avy amin'ny Grupo Forrmiguinha da Boa Morte – São Tomé, Aogositra 2009. Lahatsary avy amin'i Alexandra Dumas tao amin'ny YouTube.
Toerana fifamotoanana sy fifangaroan'ireo olona samihafa i Sao Tome sy Principe. Vokatr'io fifangaroana io, nitelina fomban-drazana maro samihafa izahay, indrindra indrindra fa ireo fomba amam-panao sy kolotsaina nentin'ireo olona tonga mba hanatanteraka fifanekem-piaraha-miasa teo amin'ireo nosy ireo.
Seranana iray fidirana ho an'ireo kolotsaina
Nanome aingam-panahy ho anà mpanakanto vahiny marobe i Sao Tome, sy asa famoronana mifandrohy amin'ireo taranany any ampielezana. Toy ny an'ilay hira Capeverdeana malaza nosoratan'i Cesaria Evora Sodade  (Longing) ary ny fitanisàna ilay kere Capeverdeana tamin'ny 1947 (Fome 47 , nosoratan'i Simentera), izay nitarika ireo Portioge mpanjanaka hamindra olona an-jatony ho ao Sao Tomé. Saingy tsy avy amin'ireo firenena mampiasa sy miteny Portioge ihany ireo voanjo nandeha tany Sao Tome. Ny fifandraisana iraisampirenena avy aminà tany samihafa eran'ny vazantany amin'izao tontolo izao no nanjary lasa kasinga nandrafitra ny kolotsain'i Sao Tomé (kolotsaina Santomeana).
Isan'ny ohatra iray tena miavaka amin'ny tandindon'ny kolotsaina vahiny ao amin'ny firenena izao – mahatonga ny maro hilaza fa [it] fa izay no tena misongadina indrindra – dia ny antsoina hoe Tchiloli. Ny loharano nipoiran'ny mpanoratra azy  [pt] sy ny fomba nanmpidirana azy  [pt] tao Sao Tome dia tsy dia mazava loatra: na izy io “tonga avy any Frantsa, nandalo an'i Espana, ary angamba aza tany Portugal” na raha to aizy io nosoratan'ilay Portioge jamba mpanoratra tononkalo avy ao amin'ny nosy Madeira, antsoina hoe Baltazar Dias, na raha nentina avy any Brezila, mizarazara by fomba fijery. Ny zavatra fantatra  dia ny Tchiloli:
lalaovin'ireo olona manana ny toerany ao amin'ny fiarahamonina avy amina tanàna samihafa eo amin'ny nosy (…). Ny anjara fototra amin'izany dia ifampitàna amin'ireo taranaka mifandimby. Mitafy amin'ny fomba Eraopeana (ny fitafim-behivavy indrindra indrindra) sady mitondra saron-tava, ireo lehilahy mpiantsehatra indray mitantara ny Renaissance (fahaterahana indray) miaraka amin'ny feon-javamaneno sy ny dihy, mahatonga ny fampisehoana ho fihetsiketsehana ara-kolotsaina tsy manam-paharoa momba ny lova ara-kolotsaina Afrikana sy Eraopeana.
Misy fantina lahatsarin'olon-tsotra  ary saripika  maro azo jerena ao amin'ny aterineto, hatramin'ny fanadihadiana  fohifohy hatramin'ny 1988. Ao anatin'ity tafatafa  ity, nomena ny lohateny hoe “Sarontva sy Angano” nosoratan'i Mar Filmes (misy dikanteny amin'ny teny Anglisy), dia manazava ny iray amin'ireo mpilalao ny amin'izay tokony hananana raha te-ho isan'ireo handalo fifantenana (cast) hilalao ny Tchiloli:
Danço Congo (Mandihy Congo aho), fantatra ihany koa amin'ny hoe The Captain's Dance, dia iray koa amin'ireo fiakarana an-tsehatra ara-kolotsaina isan'ny tena nentin'ireo mpiasa avy any Congo ho ao Sao Tome sy Principe fony vainvandron'ny fanjanahana. Mazava tsara ny namaritan'ilay  [pt] Angole mpandihy sy mpikaroka, Miriam Machado azy ho dihy “henjankenjana, maroloko, fanao an-tsehatra, miaraka amina dihy mirindra henjankenjana – matetika mahery setra mihitsy “, izay azo jerena ao amin'ny lahatsary  iray novokarin'i Alexandra Dumas ao amin'ny YouTube.
Danco Congo, ao amin'ny bilaogy Patrimonio de Sao Tome
Ny Danço Congo dia matetika no atao mandritra ny fankalazana ny andron'ny fahaleovantena, ary Miriam no miteny amintsika mikasika ny toetra miavaka mahasondriana  ananan'izy io:
Noraràna nandritra ny vaninandro fanjanahantany ny Danço Congo noho ny gadona mahery setra ananan'izy io notsarain'ireo voanjo ho mandreraka ny mpandihy ka mampihena ny vokatra azo rehefa miasa.
Misy fitantarana feno ny tantarany  [pt] amin'ny endrika hafa koa navoaka ao amin'ny bilaogyPatrimonio de Sao Tome araka n y nambaran'ny Filohan'ny vondrona ara-kolotsaina Danço Congo Mine-Carocel de Almeirim, Libiano Frota, izay malahelo fa “manjavona” ny kolotsaina, noho ny fanohanana zara raha misy ataon'ny manampahefana miandraikitra ny sehatry ny kolotsaina saingy tsy izay ihany:
raha maty amin'izao fotoana izao aho, dia ho faty miaraka amin'izay koa ny Danço Congo, satria tsy liana afa-tsy amin'ny jaca, safu, mangos, lalao karatra sy baolina kitra monja ny tanora – fa tsy ny Danço Congo.
Antso ho fiarovana ny kolotsaina.
Tanatinà lahatsoratra ao amin'ny bilaogy Spirito Santo manoritsoritra ny Danco Congo ho toy ny endrika “tsy mampinon'ny fanoherana ara-kolotsaina”, Helder D'ava, olon-tsotra Santomean iray, dia nitondra fanehoan-kevitra hoe [pt]:
Mahamenatra fa dia ao STP (toerana niaviako), noho ny ataon'ny manampahefana sy ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, tsy mipetraka hanana ny tena lanja tokony ho azy ireny seho ireny, mahatonga azy ireny ho very miandalana isan'andro vaky izao.
Danço Congo, dikasary avy amin'i Alxandra Dumas tamin'ny lahatsary nalaina tao amin'ny bilaogySpirito Santo
Vahaolana vitsivitsy ho “fitahirizana ny tantaran'i Sao Tome mba hananan'ireo taranaka ho avy lova mendrika hohajaina sy hotiavina” no naroson’  [pt] ireo mpianatra avy amin'ny sekoly momba ny Lova Ara-Tantara:
tokony hifantoka misimisy kokoa amin'ny famerenana manoratra ny tantaran'ireo (…) fisehoana an-tsehatra ara-kolotsaina isan-karazany ireo mpanoratra ;
tokony hanome sehatra mivelatra ho fandefasana ireny fisehoana ara-kolotsaina ireny ny fahitalavitra ao Sao Tome;
tokony hanao hetsike bebe kokoa ny fanjakana ary mampiroborobo mivantana ireny tarika ara-kolotsaina ireny.
Miantso koa izahay ho an'ny sarambabem-bahoaka mba hanaja ny fahaizana sy fomba amam-panao nentin-drazana ho toy ny lova iraisana avy amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fanaovana fanentanana ho fanabeazana mikasika ny lova, mba ho fampahatsiarovan-tena mikasika ny lentan'ny fomban-drazan'ny olona sy [hanome tosika] hanajana ny fahasamihafàna ara-kolotsaina.
Lahatsoratra namarinin'i Janet Gunter  avy amin'ny teny Anglisy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/07/21/19910/
 Sao Tome sy Principe: http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe
 nahazanatany an'i Sao Tome: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_S%C3%A3o_Tom%C3%A9_and_Pr%C3%ADncipe
 dia nanazava: http://stomepatrimonio.blogspot.com/2008/03/tchiloli.html
 maro hilaza fa : http://saotomeprincipetrip.com/il-teatro-del-tchiloli-64.html
 fomba nanmpidirana azy: http://www.buala.org/pt/palcos/carlos-magno-no-equador-a-introducao-do-tchiloli-em-sao-tome
 fantina lahatsarin'olon-tsotra: http://wn.com/tchiloli
 dia nitondra fanehoan-kevitra hoe: http://spiritosanto.wordpress.com/2011/02/27/ainda-o-danco-congo-de-sao-tome-e-principe/